IINGCAMANGO EZINGAMA-21 ZOYILO LWEKHITSHI ELINCINCI - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iingcamango ezingama-21 zoYilo lweKhitshi elincinci
Iingcamango ezingama-21 zoYilo lweKhitshi elincinci
Le galari ibonisa iingcamango ezincinci zekhitshi kwiindlela ezahlukeneyo. Abo banendawo encinci yekhitshi bayazi ukuba kunokuba ngumceli mngeni wokufumana ikhitshi elifanelekileyo elibukeka linomtsalane kwaye lihlala lisebenza. Apha ngezantsi kukho uyilo oluninzi lwangaphakathi ukukunika izimvo zokufumana ngakumbi kulwakhiwo lwekhitshi elincinci.
umakhulu kamakoti unxiba ubude beti
Ikhitshi eboniswe kumfanekiso ongentla isebenzisa ubume obulula be-L. Iindonga zikumbala oqaqambileyo otyheli kwaye isilingi imhlophe ukunceda ukwenza indawo ibonakale inkulu. Iikhabhathi zasekhitshini azinakho ukuhonjiswa kunye nokubumba, kodwa endaweni yoko zisebenzisa iikhabhathi zeenkuni ezi-wengue. Icandelo elisezantsi lekhabhathi ephezulu lixuba iikhabhathi ze-wengue kunye nokusetyenziswa kweengcango zeglasi ezinekhephu kunye nokubiyelwa kwentsimbi engenasici, ngelixa izixhobo zineeyunithi zensimbi ezingenazintsimbi. I-countertop iqinile-ebusweni kumbala omhlophe omhlophe, kunye neglasi epeyintiweyo ebuyiswe ngasemva kwi-backsplash yayo.
Uyilo lweKhitshi elincinci
Ngaba ufuna ukwenza elona thuba lincinci lekhitshi lakho? Nazi iindlela ezintathu ezilula zokukunceda wolule indawo ekhoyo.
Yenza uninzi lokugcina - Endaweni yeekhabhathi ezivaliweyo okanye iikhabhathi, zama ukuvula indawo yokugcina. Ukuba uyeka iingcango kwiikhabhathi okanye iikhabhathi zakho, oku kuya kuvumela abantu ukuba babone iindonga ngasemva kwaye baboleke indawo yokukhohlisa.
Sebenzisa iglasi -Iingcango zeglasi ezigcweleyo okanye ezingaphelelanga ziya kuvumela abantu ukuba bajonge ngaphakathi kwaye baqhubeke nokubolekisa ngobunzulu. Iipili kudala zisetyenziselwa ukwenza inkohliso yendawo; Iingcango zekhabhathi ezifakiweyo ziya kusindisa injongo efanayo. Indawo yokugcina ikhutshiwe, ishelufu egungxula eludongeni okanye kwiikhabhathi ezingena eludongeni, yongeza ukugcinwa ngaphandle kokuchitha umgangatho okanye indawo yomoya.
Gcina indawo yakho yokugcina icocekile -I-Clutter ithatha indawo, ukungcola okuncinci kuya kukunceda uhambe ekhitshini ngokulula kwaye wenze igumbi lonke libonakale licocekile. Ukucoceka, iishelufa ezivulekileyo ayisiyondawo yokugcina kuphela kodwa imiboniso enomtsalane ebolekisa isimilo kunye nomoya. Yenza uyilo ngokugcina. Izinto zakudala zokubhaka okanye zokuhombisa ezixhonywe ngaphezulu kwentloko yakho yasimahla kwaye zinomtsalane wokuhombisa. Iibhasikithi okanye iitreyi zokubamba iingqayi zeekhonteyina okanye izixhobo eziyimfuneko zinokuqinisekisa ukuba uyifumana ngokukhawuleza le nto uyifunayo ngaphandle kokuphithizela imiphezulu yeetafile zakho.
Ukukhanya kodwa okuqaqambileyo Ukukhanya kwendalo kwenza indawo ibonakale ngathi inomoya kwaye iphangalele, sebenzisa kangangoko unako. Iifestile kufuneka zingabinanto. Ukufakwa kweefestile kufuneka kube kuncinci kwaye kwenziwe ngezinto ezilula. Umthunzi opaque okanye ukulinganisa kwe-gauzy kukuhombisa ngelixa ubeka ukukhanya.
Iindonga ezimhlophe ziya kubonakalisa ukukhanya kwaye zenze ukuba iindonga zibonakale ngathi ziyancipha. Iphalethi emhlophe ubukhulu becala, enjengeendonga ezimhlophe kunye neekhabhathi ziya kwenza indawo engenamthungo. Amehlo akho aya kuthatha yonke into ngaphandle kokubona imida kunye nemiphetho. Ungasebenzisa imibala emininzi emhlophe okanye eyahlukileyo yokuyigcina kwiimvakalelo zokungabinantsholongwane okanye ukungakhathali. Ukuba awufuni ukusebenzisa yonke imhlophe, hamba nge-pastel okanye imibala ekhanyayo. Isikimu sombala esahlukileyo, apho usebenzisa imibala eyahlukeneyo kodwa efanayo, inesiphumo sokuqina kunye nokwanda. Xa kukho umahluko omncinci phakathi kwemibala yothetha udonga, i-countertop kunye nezinto ezenziwe ngomthi, amehlo abantu aya kuthi tyaba ngaphezulu kwemiphezulu kwaye intshukumo iya kubenza bacinge ukuba isithuba sikhulu kunokuba sinjalo.
Jonga phantsi -Ukuba ufuna imigangatho yeenkuni, yenze ibalabala. Cinga ukusebenzisa ukutshintshana kwemigca yokukhanya kunye nomthi omnyama kancinci ukuze ube nempembelelo enemigca. Imigca iboleka ubude kwaye imigangatho enemigangatho inokulula indawo yomgangatho. Iibhola ezinemigca zinokuba nesiphumo esifanayo. Ukuba ufuna ukusebenzisa iithayile okanye i-vinyl, cinga ukusebenzisa iipateni zejiyometri ezinde ukudweba amehlo nokuba ubude bume nkqo. Ipateni elungileyo oyisebenzisayo iya kuba yidayimani engaphezulu. Qinisekisa ukuba iidayimani zenza imigca ediagonal enika amehlo akho indlela ende yokulandela ukuze igumbi liziva libanzi.
Lo ngumfanekiso wesibini ofanayo Ikhitshi elimile L kuboniswe ngasentla. Uyilo olwahlukileyo lwesilingi lukwabalulekile kolu luyilo lwekhitshi, apho ubume baphantsi kwakhona bulandelayo. Iithayile zamatye e-porcelain zekhitshi zahlulwe kwidayok encinci yokutyela enedayili yentsimbi enqamlezileyo engena kwimigangatho ekhanyayo eyenziwe ngobuchwephesha.
Indlela yoyilo encinci kule khitshi iyakwazi ukugcina ukungcola kwindawo encinci kunye nexesha elifanayo, ukubonelela ngendawo ephezulu yokulungiselela ukutya. Iithayile zeqanda ze-porcelain ezimhlophe zinceda ukubonakalisa ukukhanya ukukhanyisa ikhitshi, kwaye ucango lokuvula ukuvula iingcango zekhabhathi eziphezulu zigcina yonke into icocekile kwaye ijongeka ngathi iyakhazimla.
Lo mfanekiso wesibini wale seti yekhitshi ubonakalisa ukujonga kufutshane kwiikhawuntari. Umthala omnyama onqabileyo wokuma komphezulu ophuma ngaphandle kwiikhabhathi ezimhlophe kakuhle, kwaye kwa loo nto inye isetyenziselwa ibha encinci / ikhawuntara yesidlo sakusasa. Isinki idityaniswa ngaphandle komthungo kunye ne-countertop njengoko isebenzisa izinto ezifanayo ezomeleleyo, nkqu ne-backsplash isebenzisa uhlobo olufanayo lwendawo eqinileyo. Iindonga eziveziweyo, ukuze zihlukane neekhabhathi ezingacacanga, zikwisiphelo esimhlophe esimhlophe.
Ubeko oluninzi lwekhitshi oluncinci lusebenzisa uyilo olunye lodonga. Eli gumbi lihambelana nekhabhathi yokhuni olumnyama kunye nokukhanya okukhanyayo kwe-beige travertine backplpl kunye ne-beige granite countertops. Igumbi elikhulu leepantry elibonisa umnyango weglasi enesitayile kunye nokubhala okubhaliweyo.
Eli khitshi linokukhethwa okuqaqambileyo kwemigangatho yeplanga leMaple kunye nomthunzi omncinci ngakumbi we-mustard etyheli-orenji kwiindonga zayo. Iifestile ezinkulu zemifanekiso kunye neengcango zeglasi zenza ukukhanya kwendalo okuninzi, zikhanyise indawo yekhitshi, iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini zinceda ukukhanyisa indawo. Imiphezulu yeetafile isebenzisa iAzul Platino Granite, kwaye i-backsplash isebenzisa iithayile zodongwe eziBlue kunye naOrange.
Uyilo lwekhitshi lwanamhlanje lujolise kwabamhlophe nabantsundu. Iithayile zomgangatho ziithayile ezimhlophe ze-porcelain, kunye neethayile ze-porcelain ezimnyama eziphantsi kwekhawuntara yebar. Kwisilingi, umhlophe ikwangumbala okhethiweyo, ngelixa ipeyinti emhlophe isetyenzisiwe ezindongeni. Iikhabhathi ezingaphambi kwekhawuntareni kunye nekhabhathi yeepryry zonke zimhlophe, ngelixa iikhabhathi ezingaphezulu zikumthunzi wekhrim ngokudibanisa iminyango yekrimu kunye neminyango yeglasi. I-countertop isebenzisa umphezulu omnyama oqinileyo ukugqiba.
Eli khitshi lipakishwe kancinci lalinokulingana isiFriji soMnyango sesiFrentshi kunye Ikhitshi elimile U kunye nekhawuntara encinci / bar engqindilili. Ukunceda ukwenza indawo ibonakale inkulu, iindonga zazigcinwa zimhlophe, kwaye nombala obuyela umva umhlophe. Iikhabhathi zasekhitshini zizinto zonke zomthi oqinileyo ogqitywe ngombala obomvu weMahogany, kunye neKashmere countertop emhlophe ethe tyaba enceda ukubonakalisa kunye nokubuyisa ukukhanya.
Ikhitshi lwanamhlanje elinendlela yokudlala ekwabeleni ogqityiweyo. Iindonga zayo ezibomvu ziya kuba luphawu lokuqala lokuthatha ingqalelo yakho, zisenza zonke izinto ezinombala okhanyayo ekhitshini zivele zivele ngaphandle. Iikhabhathi zekhitshi zidibanisa umbala omhlophe ongaphantsi / omhlophe we-laminate kunye nombala we-wengue, kwaye uqhubeke ukudibanisa kunye neentsimbi zentsimbi ezingenazintsimbi zenziwe ngamacango ekhabhathi yeglasi efrijiweyo. Izinto zokubala ezisetyenzisiweyo zimhlophe ziqinile, zigxininisa ngakumbi ukucoceka kwazo kunye nokujonga okuncinci.
Eli khitshi linika imvakalelo yekhitshi elidala elingaphantsi kwekhitshi, kuphela ukuba eli liqaqambile kwaye lamkela ngakumbi. Iingqameko zalo kunye neentsika zinxitywe ngamatye endalo, kunye nemiqadi yeplanga evulekileyo kunye nophahla olupeyintwe mhlophe, ukuyinika inkangeleko eluhlaza. Iindonga zipeyintwe ngomthunzi omdaka ohambelana nekhabhathi yendalo yemephu iikhabhathi zasekhitshini, ngelixa ucango kunye neefestile zezakhelo zonke zimhlophe ukuze zibonakale zisahlula ezindongeni. Imiphezulu yeetafile isebenzisa amacwecwe amahle e-Beach emhlophe emhlophe, kwaye udonga ngasemva kwebala lokupheka lwalugqityiwe ngeethayile ezimhlophe ezifakwe iithayile zecaramic ezilungelelaniswe kakuhle.
Eli khitshi linemifanekiso emikhulu iifestile ezivumela ukukhanya kwendalo, kunye nokukhanyisa iindonga zegolide ezithandekayo ze-beige kunye neethayile zelitye zelitye. Kuyanceda ukuqaqambisa isicwebezelisi esimenyezelelweyo semiphezulu yeetafile zegranite kunye nekhabhathi zekhitshi laseMaple. Ikhawuntari encinci yesiqithi inezitulo ezibini zetsimbi kunye nezibane ezihonjisiweyo zokukhanya.
Umtsalane wale khitshi sisibheno sayo esimbala kunye nesomzi mveliso-imiphantsi yegreyitazzo, iindonga ezimhlophe, isilingi emhlophe kunye nemibhobho yokuveza imibhobho ebonakalayo. Nangona kunjalo, iya kuguqulelo olucocekileyo lwesitayile seshishini ngokukhetha imibala kunye nokugqitywa. Iikhabhathi zipeyintwe ngombala wekhrimu okhanyayo kunye nethwitha yokuhombisa yegranite yokutshatisa, ngelixa iithayile ze-backsplash's mosaic ikwimbala okhanyayo okhanyayo. Izimvo zoyilo lwekhitshi elincinci ngolu hlobo olunenzuzo yesicwangciso somgangatho ovulekileyo lunokongeza isiqithi kwindawo eyongezelelweyo yokulungiselela ukutya kunye nendawo yokutya-ekutyeni.
Umama wehlobo lomyeni onxibe
Elinye ikhitshi elincinci elikwaziyo ukwandisa ukusetyenziswa okuninzi kwendawo. Ukuqala ngombala okhanyayo we-ceramic tile floor, umbala ofanayo okhanyayo ukhwela ezindongeni kwaye uphelele kuphahla olumhlophe. Iingcango zekhabinethi zinamabala e-zebra aneziphatho zedrowa eziqhubekayo kakhulu. Ngokwenyani kwi-aesthetics yayo encinci, i-countertop ilaminishwe ngombala, kwaye iikhabhathi ezingaphezulu zikwisiphelo esimhlophe esimhlophe, kunye ne-sienna graphicote backsplash. Ikhawuntara engwevu egreyithiweyo ngaphandle komthungo ihamba ijikeleze ikhitshi ukuya kumphezulu wekhawuntara encinci / ikhefu.
Ngokuqhelekileyo ikhitshi yesitayile sanamhlanje, olu luhlobo luhlengahlengisa iphalethi ye-wengue kunye emhlophe. Iindonga kunye nophahla zimhlophe gca, zinemigangatho emhlophe yeethayile ye-porcelain kunye nemiphezulu yeetafile emhlophe eqinileyo. Iikhabhathi zekhitshi ezenziwe ngomthi zonke zigqityiwe wengue ngokutsalwa ngentsimbi engenasici kunye nebhola ekhatywayo. Izixhobo ziya kubakho ngentsimbi engenasici, kwaye i-backsplash isebenzisa indibaniselwano yeethayile ezimnyama ezimnyama kunye ezimhlophe zeceramic.
Ngokutsha nokukhanya, eli khitshi liyimbonakalo yoyilo olucocekileyo nolwanamhlanje. Itshintsha iphalethi emhlophe emhlophe nefudumeleyo kwaye ayinanto yokuhombisa. Ikhitshi elinemigca enesitrato sebhari yesiqithi, kunye nekhabhathi ezimhlophe ezilamintiweyo kunye nemiphezulu yeetafile emhlophe eqinileyo Zonke izixhobo zekhitshi zenziwe ngentsimbi engenasici, ngelixa i-backsplash kunye ne-kickspace zisebenzisa iglasi yegraphicote efudumeleyo.
Uyilo lwekhitshi lwanamhlanje ludibaniso oluhle lwemibala kunye nokugqitywa, kulula emehlweni kwaye kunika imvakalelo efudumeleyo neyamkelekileyo. Imigangatho eqinileyo yomthi yeyomthi ongathathi hlangothi womthi we-beech, ngelixa zonke izinto zomthi zisebenzisa umbala weGolden Walnut, inika ubushushu kunye nomlinganiswa ekhitshini. Ezinye izinto ezinje nge Isiqithi sekhitshi yesiqhelo isebenzisa indawo esezantsi yokutya kwindawo yokutya kunye nekhawuntari ephezulu yokulungiselela isidlo. I-countertop yoyilo kunye nodonga lwe-pantry / i-oveni konke kumhlophe, ngelixa iikhabhathi ezingaphezulu zisebenzisa umthubi okhilimu wee laminates kwaye azisebenzisi zixhobo zekhompyutha, ezenza ukuba zidibane eludongeni.
Uyilo lwekhitshi elinomtsalane wazo zombini kunye neendlela zakudala zoyilo. Iindonga eziluhlaza ezilumkileyo zinika imvakalelo yabantu abadala egumbini kwaye kwangaxeshanye, inceda ukwenza iqabunga lekhabhathi elimhlophe likhabhathi ekhitshini. I-granite emnyama yinto esetyenziswayo kwi-countertop ekuchaseni ukubonakala kweekhabhathi ezimhlophe, ngelixa izixhobo zekhabhathi ezisetyenziselwa iikhabhathi zihambelana nazo zonke izixhobo ekugqityweni kwentsimbi engenasici. Imigangatho ye-Oak Golden eqinileyo, enika ikhitshi ukukhanya okufudumeleyo.
Olona phawu luchazayo loku uyilo lwangoku lwekhitshi indibaniselwano yayo yeplanga yokuKhanya kweWalnut kunye nomphezulu omnyama oqinileyo weendonga zayo / i-splashboard. Ngelixa iikhabhathi zasekhitshini zigcinwa zilula nge-laminates emhlophe kunye neentsimbi ezingenasici, i-kickspace ibonakala inxibe ngokukhanya okugqithileyo kwe-walnut ukuthelekisa ukukhanya kweetayiti zomthi we-Beech.
Iingcamango zodonga zokuhombisa
Le khitshi inomdla onomdla omnyama omnyama. Iikhabhathi zasekhitshini zineenkcukacha zokubumba kwaye zonke zikwisiphelo esimnyama esimnyama kunye neentsimbi ezingenasici, ngelixa i-countertop isebenzisa iBlue Pearl Granite. Ukulinganisa ubumnyama, iithayile ezimhlophe zomgangatho weceram ziyanceda ukubuyisa ukukhanya okuvela kwiifestile ezinkulu kunye nezibane ezingezizo. Okokugqibela, i-backsplash isebenzisa iithayile ezimhlophe ze-porcelain ukunceda ukukhanyisa indawo.
Le khitshi encinci emile njengo-L inezinto ezinesitayile esimhlophe esimhlophe ngombala omkhulu ohamba ngombala oluhlaza ongaphantsi kohlaza. I-countertop yeplanga inikezela ngokungafaniyo kwaye ifanelana neenkuni zibukeka ngeplanga.
Ngelixa imigangatho yendawo isebenzisa imigangatho ye-rosewood enesibindi, iindonga kunye nophahla konke kugcinwa kulula ngepeyinti emhlophe. Ukulandela isitayile sanamhlanje esincinci, iikhabhathi zasekhitshini ubukhulu becala zimhlophe ngokuqaqamba zidityaniswe neglasi enqabileyo kunye nentsimbi engenasici, ngelixa iikhabhathi ezisezantsi, kubandakanya ikhawuntara yebar, zisebenzisa ii-laminates zomthi ongwevu, ezenza ukuba izinto zokubala zomhlaba ezimhlophe ziqaqambe. Kwi-backsplash, iithayile ezimhlophe zangaphantsi zazisetyenziswa, kunye ne-grout emhlophe yokunceda ukugcina ukubonakala kucocekile kwaye kulula.
Oku kuqukumbela igalari yethu yezitayile ezomeleleyo zekhitshi lokuyila iikhitshi ezincinci. Qiniseka ukuba ujonga eyethu iikhitshi ezincinci ezineekhabhathi ezimnyama kwimifanekiso emininzi eyonwabisayo yoyilo lwangaphakathi.
Ukutshintsha kwegama lokundwendwela emva komtshato
oomama iilokhwe iintombi umtshato
Ukutshata eMexico entsha